ဒီ အချစ် ကို ဘာ နာမည် ပေးသင့်လဲ? - ဝီကီပီးဒီးယား
ဒီ အချစ် ကို ဘာ နာမည် ပေးသင့်လဲ?
အချစ် ရိုမန့် ဟာသ
Rabba Ve - ရဗ္ဗ ဗေ
Star Plus (အတွဲ ၁)
Hotstar (အတွဲ ၂)
၆ ဇွန် ၂၀၁၁ (၂၀၁၁-၀၆-၀၆) – ၁၅ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၅ (၂၀၁၅-၁၂-၁၅)
ဒီ အချစ် ကို ဘာ နာမည် ပေးသင့်လဲ? Iss Pyaar Ko Kya NaamDoon? (ဟိန္ဒီ : इस प्यार को क्या नाम दूं?) သည် အိန္ဒိယ ဟိန္ဒီ စကားပြော အချစ်ဒရာမာ ဇာတ်လမ်းတွဲ ဖြစ်သည်။ ဇာတ်လမ်းတွဲကို Star Plus ရုပ်သံလိုင်းတွင် ၆ ဇွန် ၂၀၁၁ မှ ၃၀ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၂ အထိ ထုတ်လွှင့် ပြသ ခဲ့သည်။ 
၂၄ ရက် နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၅ တွင် Hotstar Platform မှ Iss pyaar ko kya naam doon? - Ek Jashn ကို Iss pyaar ko kya naam doon? ရဲ့ အဆက် အဖြစ် ပြသခဲ့သည်။ Barun Sobti က အာရ်နဝ် အဖြစ် Sanaya Irani က ခူသျှီ အဖြစ် ပြန်လည် သရုပ်ဆောင် ခဲ့သည်။
၄ နိုင်ငံတကာတွင် ပြသမှုများ
၅ ဆုများနှင့် ဆန်ကာတင်
Lucknow မြို့မှ လူလတ်တန်းစား ကောင်မလေး ခူသျှီ ကုမာရိ ဂုပ္တ နှင့် အထက်တန်းစား စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင် အာရ်နဝ် သိင်္ဃ ရာဣဇဒ တို့ နှစ်ဦးကြား အလွဲများ နှင့် အချစ် ရို့မန့်များ ကို ရိုက်ကူး ဖော်ကြူးထားသော ဒရာမာ ဇာတ်လမ်းတွဲ ဖြစ်သည်။
Barun Sobti က အာရ်နဝ် သိင်္ဃ ရာဣဇဒ အဖြစ်၊ ခူသျှီ ရဲ့ ခင်ပွန်း အဖြစ်၊ အန်ဂျလီ ရဲ့မောင် အဖြစ်။ (၂၀၁၁-၁၂)
Sanaya Irani က ခူသျှီ ကုမာရိ ဂုပ္တ အဖြစ်၊ အာရ်နဝ် ရဲ့ ဇနီး အဖြစ်၊ ပါယာလ် ရဲ့ ညီမ အဖြစ်။ (၂၀၁၁-၁၂)
Vishesh Bansal က အာရာဝ် အဖြစ်။ အာရ်နဝ် နှင့် ခူသျှီ တို့ရဲ့ သား။ (၂၀၁၂)
Dalljiet Kaur က အန်ဂျလီ အဖြစ်။ အာရ်နဝ် ရဲ့ အမ၊ သျှမ်း ဃျား ရဲ့ ဇနီး။ (၂၀၁၁-၁၂) 
Abhaas Mehta က သျှမ်း ဃျား အဖြစ်။ အန်ဂျလီ ရဲ့ ခင်ပွန်း၊ အာရ်နဝ် ရဲ့ ယောက်ဖ နှင့် ခူသျှီ ရဲ့ စေ့စပ်သူ။ (၂၀၁၁-၁၂) 
Akshay Dogra က အာကာ့သျှ် အဖြစ်။ အာရ်နဝ် ရဲ့ ညီအကို၊ ပါယာလ် ရဲ့ ခင်ပွန်း။ (၂၀၁၁-၁၂) 
Deepali Pansare က ပါယာလ် အဖြစ်။ ခူသျှီ ရဲ့ အမ၊ အာကာ့သျှ် ရဲ့ ဇနီး။ (၂၀၁၁-၁၂) 
Jayshree T. က ဒေဗျာနိ ဒေဝီ အဖြစ်။ အာရ်နဝ်၊ အန်ဂျလီ နှင့် အာကာ့သျှ် တို့ရဲ့ အဖွား။ (၂၀၁၁-၁၂)
Sanjay Batra သျှာသျှီ ဂုပ္တ အဖြစ်။ ပါယာလ် နှင့် ခူသျှီ တို့ရဲ့ အဖေ။ (၂၀၁၁-၁၂)
Pyumori Mehta က ဂရီမာ ဂုပ္တ အဖြစ်။ ပါယာလ် နှင့် ခူသျှီ တို့ရဲ့ အမေ။ (၂၀၁၁-၁၂)
Abhaa Parmar က မဓူမတီ ဂုပ္တ အဖြစ်။ ပါယာလ် နှင့် ခူသျှီ တို့ရဲ့ အဒေါ်။ (၂၀၁၁-၁၂)
Utkarsha Naik က မနိုရမာ ရာဣဇဒ အဖြစ်။ အာကာ့သျှ် ရဲ့ အမေ၊ အာရ်နဝ် နှင့် အန်ဂျလီ တို့ရဲ့ အဒေါ်။ (၂၀၁၁-၁၂) 
Rajesh Jais သည် မနိုဟာရ် ရာဣဇဒ အဖြစ်။ အာကာ့သျှ် ရဲ့ အဖေ၊ ဒေဗျာနီ ရဲ့ သား၊ မနိုရမာ ရဲ့ ခင်ပွန်း။ (၂၀၁၁-၁၂)
Kand Goddwani က နန္ဒ ကီသျှိုရေ အဖြစ်။ အာကာ့သျှ်၊ အာရ်နဝ် နှင့် အန်ဂျလီ တို့ရဲ့ တစ်ဝမ်းကွဲ။ (၂၀၁၁-၁၂) 
Sana Makbul က အာရ်နဝ် ရဲ့ ရည်းစားဟောင်း လာဝနျာ ကသျှပ် အဖြစ်။ (၂၀၁၁)
၁ ၃၉၈ ၆ ဇွန် ၂၀၁၁ ၃၀ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၂
၂ ၈ ၂၄ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၅ ၁၅ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၅
ဒီ ဇာတ်လမ်းတွဲ ကို Star Plus ရုပ်သံလိုင်းတွင် အပိုင်း ၃၉၈ ပိုင်း ဖြင့် ထုတ်လွှင့်ခဲ့သည်။ အပတ်စဉ် ပြသချိန် မိနစ် ၂၀ ဖြင့် ပြသခဲ့သည်။ ၂၀၁၅ တွင် Hotstar မှ IPKKND ရဲ့ အဆက် အဖြစ် အပိုင်း ၈ ပိုင်း အား ပြသခဲ့သည်။
Star India ရဲ့ လက်အောက်ရှိ နိုင်ငံပေါင်း ၅၀ ကျော်မှ ရုပ်သံလိုင်းများတွင် ပြန်လည် ပြသခဲ့သည်။
ဒီ ဇာတ်လမ်းတွဲသည် နိုင်ငံ အတော် များများတွင် အောင်မြင်မှု ရရှိခဲ့သည်။
ဘင်္ဂါလီ - বােঝেনা সে বােঝেনা(Bojhena Se Bojhena) <Star Jalsha> (remake)
ကန္နဒါ - ಅರಗಿಣಿ (Arangini) <Suvarna> (remake)
ဥရ်ဒူ - اس پیار کو کیا نام دوں (Iss Pyaar Ko Kya Naam Dun?) <Urdu 1 နှင့် H now>
တာမီလ် - இது அன்பா? (IdhuKadhala?) <Star Vijay>
တေလူဂူ - చూపులు కలిసిన శుభవేళ (Choopulu Kalisina Shubhavela) <Star Maa>
မာလယာလမ် - മൗനം സമ്മതം (Mounam Sammadham) <Asianet နှင့် Asianet Plus>
တူရကီ - Bir Garip Așk <Kanal 7>
ရုရှား - Как назвать эту любовь? (Kak Nazwat Etu Lyubov?) < Ю tv နှင့် Kuban24.tv>
ကာဇခ် - Мұздан суық, оттан ыстық <KTK>
ပြင်သစ် - La Promesse <Reunion 1 ere နှင့် Passions tv>
ဗီယက်နမ် - Mối Tình Kỳ Lạ <HTV3>
အင်ဒိုနီးရှား - Khushi <Indosiar>
အာရပ် - من النظرة الثانية (Min Annazra Thani) <Zee Alwan>
အီဂျစ် - <MBC Bollywood နှင့် MBC masr2>
အဲလ်ဘေးနီးယား - Si Ta Quaj Këtë Dashuri? <tv Klan>
ဂျော်ဂျီယာ - მოჯადოებულები (Mojadoebulebi)
ဘူလ်ဂေးရီးယား - Пътеки към щастието <Diema Family>
လစ်သူရေးနီးယား - Neklausk Meiles Vardo <Tv1>
ဥဇဘက်ကစ္စတန် - Muhabbat Tafti
ရိုမေးနီးယား - Ce Nume Sa - i Dau Acestei Iubiri ? <Antenna Channel>
အာမေးနီးယား - Ի՞նչ կոչել այս սերը? (Inch Kochel Ays Sere?) <Armenia tv>
ခရိုအေးရှား - Kako Da Nazovem Ovu Ljubav?
ဆားဗီးယား - Како да назовем ову љубав ?
ဂျမေကာ ၊ တောင်အာဖရိက - Unforseen Love <Glow tv>
ဂျမေကာ - Strange Love <CVM tv>
တောင်အာဖရိက - Forbidden Love <Star Life>
နမီးဘီးယား - Strange Love <NBC3>
ဃာနာ - Strange Love <Joy Prime>
ယူဂန်ဒါ - Strange Love <Urban tv Uganda>
ဆွာဇီလန် - Strange Love <Swaji tv>
စပိန် စကား - Duele Amar
စပိန် - <Pasiones tv>
ပီရူး နှင့် အာဂျင်တီးနား - <Panamericana tv>
အီကွေဒေါ - <Oromar tv>
ထိုင်း - แผนรักลวงใจ (Phaen Rak Lwng Ci) <Thai Ch8>
၂၀၁၂ Gold Awards တစ်နှစ်တာ မျက်နှာရှင် ဆနာယ ဣရနီ ဆုရရှိ
အကောင်းဆုံး သရုပ်ဆောင် မင်းသမီး (ရေပန်းစား) ဆန်ကာတင်
Indian Television Academy Awards အကောင်းဆုံး သရုပ်ဆောင် မင်းသား (ရေပန်းစား) ဗာရူန် ဆောဗ်တီ ဆုရရှိ
အကောင်းဆုံး သရုပ်ဆောင် မင်းသမီး
ဆနာယ ဣရနီ ဆန်ကာတင်
Indian Telly Awards အကောင်းဆုံး လူကြမ်း သရုပ်ဆောင် မင်းသား Abhaas Mehta ဆန်ကာတင်
တစ်နှစ်တာ ကျော်ကြားမှု ဗာရူန် ဆောဗ်တီ
အကောင်းဆုံး သရုပ်ဆောင် စုံတွဲ ဗာရူန် ဆောဗ်တီ & ဆနာယ ဣရနီ ဆုရရှိ
People's Choice Awards India အနှစ်သက်ဆုံး သရုပ်ဆောင် မင်းသား (ဇာတ်လမ်းတွဲ) ဗာရူန် ဆောဗ်တီ ဆုရရှိ
အနှစ်သက်ဆုံး သရုပ်ဆောင် စုံတွဲ ဗာရူန် ဆောဗ်တီ & ဆနာယ ဣရနီ
၂၀၁၃ Indian Telly Awards အကောင်းဆုံး သရုပ်ဆောင် မင်းသမီး ဆနာယ ဣရနီ ဆန်ကာတင်
အကောင်းဆုံး လူကြမ်း သရုပ်ဆောင် မင်းသား Abhaas Mehta
အကောင်းဆုံး ဟာသ သရုပ်ဆောင် မင်းသမီး Utkarsha Naik
အကောင်းဆုံး ဟာသ သရုပ်ဆောင် မင်းသမီး (Jury)
↑ Star Plus to axe ‘Chand Chupa Badal Mein’ (2 April 2011)။ 11 September 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Popular TV actors makingacomeback"၊ The Times of India၊ 15 June 2016။ 11 September 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Vipra Shrivastava။ "Sanaya Irani and Barun Sobti back in IPKKND"၊ India Today၊3February 2016။ 11 September 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Barun Sobti 'delighted' over his TV show being aired in Turkey"၊ The Indian Express၊3March 2016။ 11 September 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Swasti Chatterjee။ "I respect other people's time: Sanaya Irani"၊ The Times of India၊ 28 July 2012။ 11 September 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Daljeet Bhanot back to work after separating from husband"၊ 10 February 2015။ 11 September 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Hate mails no longer bother me: Abhaas Mehta"၊ 16 February 2012။ 11 September 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Iss Pyaar Ko Kya Naam Doon? actor Akshay Dogra becomes father toababy boy"၊3March 2016။ 11 September 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Deepali Pansare quits Iss Pyaar Ko"၊7September 2012။ 11 September 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Utkarsha Naik is back with 'Bani'"၊ 24 September 2013။ 11 September 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "It was frustrating to playacharacter role: Karan Goddwani"၊ 12 July 2012။ 11 September 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ 'Iss Pyaar Ko Kya Naam Doon' culminates on Hotstar after 8 episodes။ Indian Television Dot Com (16 December 2015)။ 11 September 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Star India gives Turkey its first ever Indian Drama Series"၊ The Times of India၊3March 2016။ 11 September 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ La Promesse – réunion 1ère (in fr)။ 11 September 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Cô dâu 8 tuổi và phim ngoại ồ ạt lên truyền hình Việt (in vi)။ Tuổi Trẻ Online (7 January 2016)။ 11 September 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Ujala Ali Khan။ "Hit Indian soap opera Iss Pyaar Ko Kya Naam Doon gets Arabic translation"၊ The National၊ 24 August 2015။ 11 September 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 26 August 2015။
↑ NBC3 – Schedule။ 26 June 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 11 September 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Indian Television Dot Com – Star Plus' 'Iss Pyaar Ko Kya Naam Doon' travels to Namibia။ Indian Television Dot Com (23 September 2014)။ 11 September 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Stuti Agarwal (23 August 2013)။ Fans are comparing me with Barun: Avinash Sachdev။ 11 September 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ IndianTelevisionAcademy.com။ 21 October 2013 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 18 March 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ The ITA Awards 2012 – Popular Top-5။ 29 October 2013 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။
↑ ၂၂.၀ ၂၂.၁ "2012 Winners"။2July 2012 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 11 September 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ 2012 And the winners are...။ People's Choice Awards India။ 31 August 2013 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 30 November 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Iss Pyaar Ko Kya Naam Doon? Hotstar အပေါ် streaming
အိုင်အမ်ဒီဘီပေါ်ရှိ ဒီ အချစ် ကို ဘာ နာမည် ပေးသင့်လဲ?
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဒီ_အချစ်_ကို_ဘာ_နာမည်_ပေးသင့်လဲ%3F&oldid=686177" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၂ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၀:၅၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။